मुक्तिनाथ विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण ( बुधबार, बैशाख २५, २०७६)
बैंकले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १८ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको छ । बोनस शेयर वितरण गरेपछि बैंकको चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । बैंकले १८ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि कायम चुक्तापूँजीको २० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले चालू आवको ९ महीनामा रू. ६० करोड २० लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी हो ।
गत आवको सो अवधिमा बैंकले रू. ४२ करोड ७५ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । मंगलवार बैंकको शेयर कारोबारमा खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप बढी छ । सो अवधिमा २१ हजार ३ सय ४७ कित्ता शेयर विक्री गर्ने र ४ हजार ३ सय ७१ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग थियो ।
2019-05-08 - 121 view(s) - abhiyan